HomeAfaan OromooHarka laachuu fi Injifannoon Galuun Tokko Miti!
Damee Boruu tin, Adoolessa 3, 2018
Biyya lafaaa kana irratti qabsoon uummatni godhu haala qabatamaa biyya sana keessa jiru fi mootummaa gosa kami akka tahe irratti hundeefama. Mootummaan biyya tokko uummata isaa abbaa irreummaan yoo hacuccee fi mirga uummata isaa molqee yoo jiraate uummatni ka’ee mirga isaa gonfachuu fi sirna demookraasiin jiraachuuf qabsoo hadhawwaa mootumma sana wajjin godhee jijjirama mootummaa fi siraanaa fidata. Uummatni akka Oromoo garbummaa jalatti cabee bitamaa jiru duraan dursee humna koloneefataa isa cabsee jiru humna waraanan irraa kaasuu qaba. Sana booda sirna walabaa fi mootummaa ilaa filaameen uummata isa bushu kan maataa isaa dhaabata.
Akka amma argaa jiru kan yoo tahe jijjirama sirnaa miti utuu jijjiramni mootummaa iyyuu hin godhamne namoonni baayyeen maqaa ABO ergifatanii odeessaa turan harka laachaa jiru. Harka laachuu isaanii miti kan bade, maqaa ABO tahuu isaa qofa. Jijjirama isaan argan kana Uummtni Oromoo cunqursaa fi darama garbummaa halkanii fi guyyaa habuuqachaa jiru hin agarre. Jijjirama kana isaan eessa dhaabbatanii argan? Uummtni Oromoo duuchaa Oromiyaa keessatti ajjeechaan irraa hin dhaabbanne. Ilmaan Oromoo kummaatan mana hidhaa keessatti daramaa jiru. Uummatni Oromoo kan durii caalaa qe’ee isaa irra buqqaa’ee yoo lubbuun jiraate hiyyumaaf saaxilamaa jira. Gootonni ilmaan Oromoo Angafa Qabsoo Bilisummaa Oromoo kan tahe kan akka jaal Nadhii Gammadaa irraa kaase warri achi buuteen isaanii dhabame seenaan isaanii bakka hin godhane. Ilmaan Oromoo qaamni irraa ciccitee fi mana hidhaa keessatti sammuun isaanii xuqqameef beenyaan tokko hin laatamne. Warri Uummata Oromoo irraatti akka sabaatti hammeenya himamee dhumuu hin dandeenye geesisan seeratti dhiyaachaa hin jiran. Har’a illee humni TPLF yaroo barbaadee fi bakka barbaadetti Uummata Oromoo fixxuu danda’a, fixxaas jira.
Qaama “mademer” Mumicha Ministeeraa tahuu caccabanii galuun Uummata Oromoof qabsawwuuf akka hin taane Uummatni Oromoo hin hubatu yoo jedhe uummata dammaqee, qinda’ee qabsoo kana dhiiga isaan as gahe tufachuu natti taha. Maaliif akka deeman, isaa akka deeman, maal gochaa akka turan, ammaa immoo maal gochuuf akka jiran Uummatni akka isaan qoratu mamii hin qabu. Namoota Oromoos tahan diinni Oromoo Uummata Oromoo bakkuma wagaa shantama dura tureetti beeka. Akka hubannaa koo yoo tahe Uummatni Oromoo waggaa shanii asi iyyuu isa waggaa shan dura ture irraa adda. Namni ykn humni ijaarame tokko har’a uuummata Oromoo nan gowwomsa jedhee kan yaadu yoo tahe gowwomaa isaa dura ofitti fudhachuu qaba.
Erga “ Kaayyoo Miniliki bakkaan gahuu, “ Baabura Jalalaa “fi “Mademer” dhaaddannoon jedhu Mumich Ministeera EPRDFiin oofamuu jalqabee warri nafaxxanyaa Oromoo kana duruu nutu bituu beeka jedhanii kan lafa dhiitan caalaa araba Uuummata Oromoo arabsaa jiran nama qaaneesa. Warra kanaaf deebii kenuun immoo caalaa of salphisuu dha. Uummanti Oromoo daandii qabsoo bilisummaa qabatee jiru irratti waan qabu maraan jabaachuu dha. Humna mootummaas tahe sirna biyya sana jijjiru kan qabu Uummata Oromoo qofa. Mumichi Ministeera EPRDF deemee odeessuu malee humna itti hawwaasa jijjiru hin qabu. Yoo amma har’a akka Uummatni Oromoo “mademer” isaa kana keessa akka hin jirre hin hubatu tahe akkuma jedhee afura wayyiin hojjeta yoo tahe malee namummaan hojjechaa hin jiru.
Yaaddoon koo guddaan kan warra harka laachaa jiruu ykn nafxanyoota lafa dhiitaa jiranii miti. Luchoo Bukuraa waraana J. Kamaal Galchuun ajajamuu of harkaan qaba jechaa hidhannaa guutuu wajjin TPLF itti harka laate. Warri gala jiran kana Luchoo Bukuraa irraa kan adda isaan godhu, miseensi, hojii geggeessituu fi waraanni dhaaba isaanuma qofa, meeshaa waraanaa hin qaban malee. Kanaafuu karaa yaaddoo sammmuun “psychology” tahee karaa humna namaa qabsoo godhuu Uummata Oromoo irratti rakkina fidu jedhee hin yaadu. ABO ( Warra Shaneen beekamu: Shanee jechuun illee KHG Jechuu dha) kan waraanan qaba jedhee dhaadatu kan midiyaa fi diinni lolaa jiraachuu isaaf raga bahaan yoo qaamni sadaffaa jiraate mootummaa wajjin dubbachuuf qophaa’aa akka tahe ibsee jira.
Mootummaa wajjin dubbachuun rakkina hin qabu. Walii galtte dhufutu haalan eegatamuu qaba. Utuu fakkeenya biyya biraa hin fudhatiin dura ABO waan ofii isaa keessa darbe irraa barachuu qaba. Qaamni sadaffaa taajjabiif yoo tahe malee hammeenya diinni WBO irraan gahu dhaabuu hin danda’u. Hooggantootni ABO bara kanaa yaroo hundaa yaroo diina wajjin marihatan WBO kuma digdamaa ol kampi itti galee dhume ija keessan duraa haa mul’atu jechuun barbaada. Kan qabsoo gochaa jirru Abbaa Biyummaa Oromoo ragaasifachuuf akka tahe mamii hin qabu. Kun hadduraa Kaayyoo ABO akka tahe warri ABO keessa jirru walii galla. Abbaa biyyuummaa gonfachuuf waaraanni garboofataa ykn Waraanni Wayaannee Oromiyaa keessa bahuu qaba. Waraana Wayyaannee Oromiyaa irra qubatee jiru WBO kampii galchuun ficisiisu taha. Waraana Wayyaanee wajjin walitti dabaluun hiree keenya murteefachuu dhabne akka fedha mootummaa Itoophiyyaa itti bara kana immoo isa Amhaaran hooggannamu jalatti akka kufuufnu tahana.
Dhugaan jiru biyyi Orommo kan Uummata Oromoo ti. Nageenya Oromiyaa kan tasgabeessuu fi eegu WBO duwwa dha. Waan biyya Impaayeera Itoophiyaa ilaalu irratti erga Abbaa biyyummaa Oromiya uummatni ragaasifatee booda marihachuu dandeenya. Maqaa araaran mootummaan bilisa baaftota dagee akka fixaaujiru beekamaa dha. Kan bara mootummaa cee’umsa WBO irra gahe olitti kaaseen jira. Seenaa fokkisaa darbe kun akka nutti hin deebine haa eegannu.
Kan biraa fakeenya Tamil Tigers kaasuun fedha. Adda bilisummaa Ummata Tamil bara 1976 dhaabbate Mootummaa Sri Lanka jalaa uummata isaa bilisa baasuuf qasboo jabaa godhan ture. Jabni humna kana karaa baayye dinqisifatama. Fuula lola dura hin ture baasii jiru. Prime Minsterii India Rajiv Gandi fi Prezedaantii Sri Lanka Ranasinghe Permadasa ajjeessuu dandanii jiru.
Bara 2002 yaroo marin araara jalqabu biyya isaanii 76% aboomanii jiru. Xiyyara xixxiqqoo kan ittiin humna mootummaa rukkutuu danda’an horatanii turan. Bara 2006 mootummaan walii galtee isaanii cabsee humna karaa hundaan irratti bobaasee dagachiisuun isaan fixe. Caamsaa 17, 2009 hooggannaan isaanii Velupillai Prabhakaran ajjeessame. Sana Booda Mootummaan Sri Lankaa uummata Tamil irratti midhaa hedduu rwwachuudhaan tuhannaa isaa jala galche.
Kaayyoo dhaabbataniif bakkaan gahuu ykn aarsaa tahan seenaa saba keenya ol kaafnee darbuu wayya malee harca’aa diinaa wal saamuuf jennee kaayyoo ganamaa gadhiifnee harka ilaannu. ABOn akka hooggannaaisaa tahu barbaada malee bilisummaa isaaf irree tokkichaan kan lolachaa jiru Uummata Oromoo ti. Uummatni Oromoo “mademerii” keessa hin jiru. Uummatni Oromoo WBO fi QBO wajjin Fincila Xumura Garbummaa finiinsaa jira.